နိုင်ငံဝင်ငွေများစွာရှာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့အနေနှင့် စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသင့်သလား…? | News Bar Myanmar
နိုင်ငံဝင်ငွေများစွာရှာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့အနေနှင့် စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသင့်သလား…?
BTS အဖွဲ့ဆိုတာလောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့ နိုင်ငံတကာမှာ အောင်မြင်ဆုံး Kpop အဖွဲ့ဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘက်ကနေ နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေအတော်များများကို ရအောင်ရှာပေးနိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝင်ငွေကောင်းရှာပေးနိုင်တဲ့ Kpop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနှင့် စစ်မှုထမ်းခွင့် မကင်းလွတ်သင့်ဘူးလား?? ဒါတွေဟာ ဝေဖန်သူတွေနှင့် ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ဖြစ်နေကြတဲ့ Debate တစ်ခုပါ။
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ အသက်၂၈နှစ်မကျော်ခင်မှာပဲ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ အမျိုးသားတိုင်း စစ်မှုထမ်းရမှာပါ။ အသက် ၂၂ နှင့် ၂၇ ကြားမှာရှိကြတဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင်များလည်း နောင်လာမည့်နှစ်များအတွင်းမှာ စစ်မှုထမ်းရတော့မှာပါ။ တနည်းအားဖြင့် အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ စစ်ထဲရောက်မယ့် ၁၈လခန့်က သူတို့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ခဏရပ်တန့်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် BTS အဖွဲ့ကို စစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသင့်လား (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး တပြိုင်နက်တည်း စစ်မှုထမ်းခွင့် ရနိုင်မလား? ဒါတွေကကတော့ BTS စစ်မှုထမ်းခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး အများကထုတ်လာခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။
တဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလျှင်လည်း BTS အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၉ခုနှစ်စစ်တမ်းအရ နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ကို ၄.၆၅ ဘီလီယံ ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေကြောင့် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပါ Kpop ဆိုတဲ့တံခါပေါက်ကြီး ပွင့်ခဲ့ရပါတယ်။ Records များစွာကိုချိုးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ international charts များမှာပါ Top ရနိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့် အခွင့်အရေးမပေးသင့်ဘူးလားလို့ တောင်းဆိုကြတာလည်း ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။
သို့သော်စစ်မှုထမ်းတဲ့ ကိစ္စနှင့်ပက်ပြီးတော့ Jin ကတော့ “ကိုရီးယာလူမျိုးတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကတော့ပုံမှန်ပါပဲ။ တနေ့နေ့မှာ နိုင်ငံကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ခေါ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ထမ်းဆောင်ဖို့ အသင့်ပါပဲ” လို့ CBS သတင်းမှာ ဖြေကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပရိတ်သတ်များအနေနှင့်လည်း အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေ အထွဋ်အထိပ်ရောက်နေချိန်မှာ အဖွဲ့လိုက်ပဲဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက်ချင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ် ၂နှစ်တာခန့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ရပ်တန့်ကုန်မှာကို မလိုလားတာဟာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ ပြန်လာတဲ့အခါမှာ အခုလိုအားပေးနေကြရင် ဒီကိစ္စဟာ ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အဓိကက သူတို့စစ်မှုထမ်းပြီး ပြန်လာတဲ့အခါကျရင်လည်း အခုလိုမျိုး အင်တိုက်အားတိုက် ဆက်လက်အားပေးကြဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
Next James Corden ရဲ့ နာမည်ကြီး Carpool Karaoke မှာ BTS သွားရောက်ပါဝင်တုန်းက ပျော်ရွှင်ဖွယ်အမှတ်တရများအကြောင်း »
Previous « ကျောင်းတုန်းက အမှတ်စာရင်းမှာထိပ်ဆုံးကမဆင်းခဲ့တဲ့ K Celebrities များ